Chelsea oo guul sahlan ka gaartay kooxda Dynamo Kyive kulanka lugta koowad ee wareega 16-ka ee tartanka Eorupe League +Sawiro – Gool FM
Chelsea oo guul sahlan ka gaartay kooxda Dynamo Kyive kulanka lugta koowad ee wareega 16-ka ee tartanka Eorupe League +Sawiro
Bashiir March 7, 2019
(Yurub) 8 March 2019 kooxda Chelsea ayaa guul muhiim aheyd garoonkeeda kaga gaartay kooxda Dynamo Kyive kulan katirsanaa lugta koowaad ee wareega 16-ka ee tartanka Eorupe League ,kulan ciyaareedka ayaana ku soo dhamaaday (3-0)
Kooxda Chelsea ayaa ku bilaabatay dar dar xoogan qeebtii koowaad ee ciyaarta waxa ayna soo bandhigeen ciyaar aad loo jecleesto.
Xidiga reer Spain ee Pedro Rodriguez ayaa ahaa xidiga ugu shaqada badnaa kooxda Bules qeebtii koowaad ee ciyaarta waxa uun a buuray dhowr fursadood mid kamida ayuuna gool u badalay waxaana ka caawiyey goolkaas laacibka jooga dheer ee Giroud .
Qeebtii koowaad ee kulan ciyaareedka ayaa lagu kala maray kooxda Chelsea oo 1-0 ciyaarta ku hogaamineysa xili kooxda Dynamo kyive ay sameesay jaanisyo qasaaray qeebtii koowaad ee dheesha.
Nasiino kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta kooxda Bules ayaana inta ugu badan laheed gacan ku heenta kulana iyaga oona soo bandhigayey kubad isku dheeli tiran oo weerar iyo difaacba leh .
Xidiga reer Barazil ee Willian ayaa dhaliyey laad xur ah oo loo dhigay kooxda Chelsea daqiiqadii 65-aad ee qeebtii dambe ee ciyaarta ,natiijada kulanka ayaana noqday 2-0.
Xiduga da’yat Hudson-Odoi oo badal ku soo galay ciyaarta ayaa dhaliyey goolkii sedexaad dhamaadkii qeebtii dambe ee ciyaarta .
Ugu dambeena kooxda martida aheyd ee Dynamo Kyive ayaa ku guul dareesatay in ay layimaadaan goolka qura xitaa , Bules ayaana xaqiijisatay in garoonkeeda wax gool ah aan lowga dhalin iyaga oona lugta labaad u safraya dalka Ukrain.
Arsenal oo guuldaro xanuun badan kala kulantay kooxda Rennes kulan ka tirsan tartanka Europe League +Sawiro
Madaxweynaha kooxda PSG oo ka hadlay mustaqbalka tababare Thomas Tuchel